सानोठिमी र बोडेमा २ सय शैयाको क्वारेन्टाइन : अवरोध गर्नेलाई ६ महिना कैद ! — Bhaktapurpost.com
सानोठिमी र बोडेमा २ सय शैयाको क्वारेन्टाइन : अवरोध गर्नेलाई ६ महिना कैद !
संजीप शुभचिन्तक भक्तपुर, १२ भदाै
भक्तपुरमा करिब २ सय शैयाको क्वारेन्टाइनस्थल पहिचान गरिएको छ । कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि थप २ सय शैयाको क्वारेन्टाइनस्थल पहिचान गरिएको हो ।
सानोठिमी र बोडेमा थप २ सय शैयाको क्वारेन्टाइन बनाइने भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताएकी हुन् ।सानोठिमीस्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद (सीटीइभीटी) अन्तर्गतको प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(टिआइटिआइ) र सानोठिमीकै युसेफ नेपालको होस्टललाई क्वारेन्टाइन बनाइने प्रजिअ पाण्डेले प्रष्ट पारिन् । त्यसैगरी बोडेस्थित कृषी बिकास बैंकको तालीम केन्द्रमा पनि क्वारेन्टाइनस्थल बिस्तार गरिने उनले जानकारी गराइन् ।
पछिल्लो समय भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण अधिक देखिएको छ । कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि सोही नगरपालिकामा करिब २ सय सैयाको क्वारेन्टाइनस्थल पहिचान भएको हो । यद्यपी त्यसलाई एकीकृत क्वारेन्टाइन बनाइने र जिल्लाभरीकै सम्भावित संक्रमितहरुलाई त्यहाँ राखिने प्रजिअ पाण्डेको भनाइ छ । उनले संक्रमितको संख्या बढेको खण्डमा क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा रुपान्तरण गरी उपचार गरिने समेत प्रष्ट पारिन् ।
बोडेस्थित कृषी बिकास बैंकको तालीम केन्द्रले जनाए अनुसार प्रजिअ पाण्डेको निर्देशनपछि कोठामा रंगरोगन थालिएको छ भने धारा, बिजुली र शौचालयको आवस्यक मर्मतसम्भार गरिएको छ । सानोठिमीको टिआइटिआइले भने शैक्षिक सस्थामा क्वारेन्टाइन नबनाइदिन अनुरोध गरेको एक कर्मचारीले बताए । यस विषयमा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक अकिम श्रेष्ठसंग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । सीटीइभीटीका सदस्य सचिव डा पुष्परमण वाग्लेले भने महामारीको समयमा आफूहरु राज्यलाई सहयोग गर्न तयार नै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूलाई यस विषयमा धेरै थाहा नभएको भन्दै उनले सिडिओबाट प्रस्ताव आएको भने स्वीकार गरे । ”यो बेला पनि तालीम चलिरहेको भन्ने छ । सम्भव भएसम्म क्वारेन्टाइन कायम नगरौ भन्ने कुरा हो तर राज्यले यसैलाई उपयुक्त ठान्छ भने हामीले असहयोग गर्ने कुरा हुँदैन ।” भक्तपुरपोस्ट संग उनले भने ।
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भने कुनै पनि सरकारी अधिकारीले क्वारेन्टाइनमा अवरोध गर्न नहुने जिकिर गरिन् । अवरोध गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार छ महिना कैद, छ सय रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उनको भनाइ छ ।
भक्तपुरमा हालसम्म खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालीम केन्द्रमा कोभिड १९ को क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि २०८ बेड रहेका छन् भने भक्तपुर अस्पतालमा भेन्टिलेटरयुक्त ८ सहित ३० बेड व्यवस्थापन गरिएको प्रजिअ हुमकला पाण्डेले जानकारी गराइन् । सानोठिमी र बोडेमा २ सय बेड बिस्तारसंगै सम्भावित संक्रमितकाे ब्यवस्थापनमा ठूलो राहत मिल्ने उनले बिश्वास व्यक्त गरिन् । ‘दुई तीन दिन भित्रै यहाँ क्वारेन्टाइन संचालन गर्छौं यसले सम्भावित संक्रमितकाे ब्यवस्थापनमा ठूलो राहत मिल्नेछ ।’ उनले भनिन् ।